Halyeeygii Hore Qaranka Colombia Faustino Asprilla Oo Ku Weeraray Real Madrid Ineysan Booskiisa Ciyaarsiin James Rodriguez. - Laacib.net
Halyeeygii Hore Qaranka Colombia Faustino Asprilla Oo Ku Weeraray Real Madrid Ineysan Booskiisa Ciyaarsiin James Rodriguez.
Halyeeygii hore qaranka Colombia Faustino Asprilla ayaa aad ugu dhaleeceeyay Real Madrid iyo tababare Zinedine Zidane ineysan booskiisa ciyaarsiin xidiga kusii dhawaanaya inuu isaga tago caasimadda ee James Rodriguez.
James wuxuu u muuqdaa mid kasii dhacaya saqafka Santiago madama lasoo warinayo inuu lacago badan ugu wareegayo kooxda Ingiriiska ka dhisan ee Manchester United.
25-jirkaan reer Colombia ayaa yimid Madrid sanadkii 2014 kadib markii uu wacdaro ka dhigay koobkii aduunka, balse wuu ku wareeray kooxda tan iyo markii loo dhiibay Zidane oo badalay bilowgii sanadkii hore Rafael Benitez.
Faustino Asprilla ayase difaacay James isagoo u sheegay in Real Madrid aysan xidigaan ka filan inuu kubadda usoo dhiciyo si la mid ah ama kaba fiican Casemiro.
“Waxey usoo iibsadeen inuu gool ka dhaliyay koobka aduunka, inuu abuuri karo goolal, sababtoo ah wuxuu awoodaa inuu dhaliyo iyo inuu abuuro” ayuu yiri Faustino Asprilla oo la hadlayay ESPN.
“Waxey usoo iibsadeen sababtoo ah wuxuu doonayay inuu isu rogo garab, waa inaad ciyaarto halka aad si fiican u taqaano”
“James maahan garab, maxaad ka rajeyneysaa? sooma dhicin karo in la mid ah Casemiro kubadda, si fudud uma weydiin kartid taas ciyaariyahan sida James oo kale ah” ayuu hadalkiisa kusoo xiray xidigii hore kooxaha Parma iyo Newcastle United.
Si kastaba James ayaa kasoo muuqday Madrid 21-kulan horyaalka La Liga, 13-kulan oo safka hore ah iyo 8-kulan oo uu badal ku yimid, balse 8-gool ayuu dhaliyay 30-kulan oo uu saftay dhamaan tartamada oo dhan.
Ugu dambeyntiina Madrid ayaa u baahan iney guuleysto laba kulan oo qura si ay xili ciyaareed aan caadi aheyn u qaadato, kulan waa midka ay Axadda La Rosaleda martida ugu tahay Malaga kaas oo ay ku xaqiijin karto horyaalkeedii 33-aad ee La Liga iyo final-ka Champions League oo ay 3-da June la leedahay Juventus.